स्लो कुकर चिकन एक ला किंग - व्यंजनहरु
तौलिए अगाडि लोडरबाट कसरी गन्ध पाउने
wok फ्राइड filet mignon pf चांग
स्पेगेटी सस र मारिनारा सॉस बीच के फरक छ?
मरीनारा र पास्ता सॉसको बिच फरक
स्लो कुकर चिकन एक ला किंग
स्लो कुकर चिकन ला ला किंग एक पफ पेस्ट्री स्क्वायरमा सेवा प्रदान गरिएको एक सुपर सजिलो, मलाई, आरामदायी डिश हो जुन तपाइँको परिवार र साथीहरूले मन पराउनेछन्।
कसले राम्रो गर्दैन क्रीमी चिकन डिश ?!?! यो स्लो कुकर चिकन ए ला किंग सुगन्धित शाकाहारीहरूले भरिएको छ र सबै फ्लाकी पफ पार्टीमा प्रस्तुत गरिएको छ। हो, तपाईं सहि पढ्नुहुन्छ। पफ पेस्ट्रीहरू केवल मिठाईहरूको लागि होईन! तर यदि तपाईं पागल हुनुहुन्छ र पफ पेस्ट्रीमा हुनुहुन्न भने तपाईं यो क्रीमयुक्त चिकन र कुनै पनि स्टार्च पास्ता, चामल, बिस्कुट… जे पनि मा पनि सब्जीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ।
म बिस्तारै मेरो ढिलो कुकरलाई माया गर्छु! धेरै मानिसहरूले यसलाई जाडोमा बनाउनको लागि सोच्दछन् हार्दिक भुनाई तर म वास्तवमा गर्मी समयमा यसलाई अधिक प्रयोग गर्दछु। यसले मलाई मेरो परिवारको लागि मीठो खाना बनाउँदछ जब बाहिर मेरा बच्चाहरू रमाइलो धूप दिनहरूको मजा लिँदै। साथै, मलाई तातो स्टोभमा उभिनु पर्दैन।
कुखुरा आश्चर्यजनक स्वाद जब ढिलो कुकरमा राम्रोसँग पकाइएको । अपरेटि– शब्द- ठीकसँग। कुखुरा गार्हो मासु होइन त्यसैले पकाउन यसलाई धेरै समय चाहिदैन, अन्यथा, यो सुख्खा हुनेछ। जब तपाईं ढिलो कुकरमा कुखुरा पकाउनुहुन्छ, यसले कममा केवल 3-4- hours घण्टा लिन्छ र त्यसपछि तपाईं राम्ररी पकाइएको, ओसिलो र कोमल चिकन पाउनुहुन्छ जुन सुन्दरताले चकित हुन्छ।
किनकि कुकुरलाई ढिलो कुकरमा लामो आवश्यक पर्दैन, तपाईंले प्याज र सेलरीलाई माइक्रोवेभमा minutes मिनेट को लागी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ कि पकाउँदा अन्तमा उनीहरू राम्रा र कोमल हुन्छन्। त्यसोभए सबै भाजीहरू, कुखुराको मासु, कुखुराको सूपको क्रीम, र ढिलो कुकरमा ब्रस मात्र टस गर्नुहोस् र यसलाई पकाउन दिनुहोस्। Hours घण्टा पछि, तपाईं स्थिर मटर, क्रीम चीज, र कर्नरस्टार्कलाई पानीमा मिक्स गर्नुहुनेछ र 30० मिनेट माथि उचाइ बिना पकाउन दिनुहोस्। यसले सास गाढा गर्न अनुमति दिन्छ। अन्त्यमा, तपाईंले भर्खर भर्खर कुखुराको भाँडो गर्नुभयो र पफ पेस्ट्री, नूडल्स, चामलमा सेवा गर्नुभयो ... रमाईलो गर्नुहोस्!
तयारी समय। मिनेट कुक समय। घण्टा 35 मिनेट कुल समय। घण्टा ० मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकमेलानीस्लो कुकर चिकन ला ला किंग एक पफ पेस्ट्री स्क्वायरमा सेवा प्रदान गरिएको एक सुपर सजिलो, मलाई, आरामदायी डिश हो जुन तपाइँको परिवार र साथीहरूले मन पराउनेछन्। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ कप मीठो प्याज पासा
▢१ रिब अजवाइन काटिएको
▢। हड्डी रहित छालाविहीन कुखुरा स्तनहरू करीव १ १/२ देखि २ पाउन्ड
▢½ चम्मच मौसमी नुन
▢½ हरियो घाउ मिर्च पासा
▢१ रातो घण्टी मिर्च पासा
▢। औन्स च्याउ काटियो
▢१० ½ औन्स सूप को चिकन को क्रीम
▢। औन्स क्रिम चिज
▢दुई चम्मच कर्नस्टार्च
▢दुई चम्मच पानी
▢१ ½ कप फ्रिज गरिएको मटर
▢१ १.3..3 औंस बक्स पफ प्यास्ट्री पानाहरू (२ पानाहरू), पग्लियो
▢१ चम्चा पानी
प्यालो, अजवाइन, लसुन र पानी सँगै एक कचौरामा मिक्स गर्नुहोस्। प्याज पारदर्शी नभएसम्म प्लास्टिक र्‍याप र माइक्रोवेभले minutes मिनेट (आधा बाटोबाट हलचल गर्नुहोस्) को लागि कभर गर्नुहोस्।
सुस्त कुकरको तल्लोमा कुखुरा राख्नुहोस् र मौसमी नुनको साथ छर्कनुहोस्। प्याज मिश्रण, बेल मिर्च, र मशरूम जोड्नुहोस्।
सूप र कुखुराको ब्रोथ एकसाथ मिक्स गर्नुहोस् र त्यसपछि ढिलो कुकरमा खसाल्नुहोस्। कवर र on घण्टा को लागी कम मा कुक।
एक सानो डिशमा कर्नस्टार्च र पानी एकसाथ मिस्नुहोस् र क्रिम चीज र मटरको साथ ढिलो कुकरमा थप्नुहोस्। मिक्स गर्नुहोस् र minutes० मिनेटसम्म पकाउनुहोस्, खुला।
यस बीच, पफ पेस्ट्री बनाउनुहोस्। चर्मपत्र कागजको साथ बेकिंग पाना वा लाइन ग्रीस गर्नुहोस्। पेस्ट्री पाना उल्टाउनुहोस् र प्रत्येक4स्क्वायरमा काट्नुहोस्। प्रत्येक वर्ग को लागी, पातलो पट्टी प्रत्येक छेउमा लगभग सबै बाटो बाट काट्नुहोस्। आफ्नो औंलाहरु संग नीलो भिन्नुहोस् र तब प्रत्येक पातलो पट्टीलाई छेउको छेउमा तान्नुहोस् र हल्का तल थिच्नुहोस्। प्रत्येक वर्गको साथ जारी राख्नुहोस्।
अण्डा र पानी सँगै मिक्स र त्यसपछि हल्का रूपमा वर्ग को ब्रश।
१२-१-15 मिनेट को लागी 400०० डिग्री सेल्सियस मा बनाउनुहोस् जबसम्म पफ र गोल्डन हुँदैन।
कुखुराको टुक्राहरू (मैले भर्खर यस ढिलो कुकरमा चकनाचूर गर्‍यो तर तपाईं यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ र पछाडि थप्न सक्नुहुन्छ)। प्रत्येक पफ पेस्ट्रीमा कुखुराको मिश्रण चम्चा र सेवा गर्नुहोस्।
क्यालोरिज:२2२,कार्बोहाइड्रेट:२g,प्रोटिन:१g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:47मिलीग्राम,सोडियम:396मिलीग्राम,पोटासियम:6 366मिलीग्राम,फाइबर:दुईg,चिनी:।g,भिटामिन ए:6565।IU,भिटामिन सी:.8 .8।मिलीग्राम,क्यालसियम:25मिलीग्राम,फलाम:१.6मिलीग्राम
कीवर्डएक ला राजा कुखुराको मासु कोर्सबेलुकाको खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
रमाईलो गर्न बढि स्वादिष्ट चिकन खाना:
क्रीमी टमाटर चिकन फ्लोरेन्टाइन पास्ता
क्रीमयुक्त पालक र आर्टिचोक चिकन
स्लो कुकर क्रीमयुक्त चिकन नूडल सूप